Baatii tokko alkoolii malee turuun fayyaa keessaniif - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, iStock/Getty Images
Torban jalqabaa alkoolii tokko malee baayyee rakkisaadha. Guyyaa digdamii saglaffaafi sodommaffaarratti, waan addatu nutti dhaga'ame qaamni keenyas ni galateeffate.
Saayinsiin akka agarsiisutti, baatii tokkoof alkoolii dhaabuun fayyaa keenyarratti bu'aa guddaa qaba.
Qorannoon kun qorannoo ballinaan yeroo jalqabaatiif garee namoota fayyaleyyii ta'an irratti yeroo gabaabaatiif alkoolii dhiisuutiin bu'aa fayyaa inni qabu ilaaledha.
Qorattoonni Yuunvarsiitii Kollejjii Landan qorannoo isaanii waan tokkorra ga'uuf galma godhatanii eegalan. Innis "dhugaatii alkoolii yeroo gababaatiif dhaabuun walqabatee akka kaansariin qaama keessatti daddamaqu waantota taasisaniin jijjiiramawwan sababoota rakkoo sirna soorata qaamatti makamuu madaaluuf ture".
Qorannoo kanaan kan isaan argatanis, namoonni alkoolii gidu-galeessaan dhuganiifi hedduminaan dhugan irraa of ittisuun kolestiroolii/cooma hin barbaachifne, ulfaatinsa qaamaafi dhiibbaa dhiigaa hir'suuf bu'aa gaarii akka qabudha.
Yaadawwan furmaataa dhumarratti dhiyaatan:
Argannoo qorannoo dhuma torbe kanaa maxxanfame kan biroon," waantonni akka kaansarii nama keessatti guddatu kakaasan gadi xiqqaachuudha".
"Odeeffannoon guurame kun walitti dhufeenya alkoolii dhuguufi wantoota kaansariif ka'umsa ta'an akkasumas dhukkuboota yeroo sirni sooranni qaama keessatti daakamuun makaman kan akka shukkaaraafi onnee ilaaluufis gargaareera."
Qorannoon Gaahutam Gehtaa, Istiwaarti Maakdoonaaldiifi Aleksaaderaa Kiroonbergiin gaggeeffame kun, addunyaatti alkooliin hir'ina qaamaafi dhukkuboota ittisuun danda'muuf sababa akka ta'an ibsa.
"Waggoota kurnan muraasaaf alkooliin Dhaabbata Fayyaa Addunyaatiifi gabaasa Fandii Qorannoo Kaansarii Addunyaatiin akkasumas Dhaabbata Qornnoo Kaansarii Yuunayitid Isteetiitiin alkooliin ka'umsa dhukkuba kaansarii ulaa qoonqoo/ liqimsituu, arsassee, laagaafi walumaa galatti ujummoo afaanirraa jalqabee garaachatti bu'uuf, armaafi ulaa bobbaaf sababa qabatamaa akka ta'etti beekama," jechuun barreessitoonni qorannoo kanaa ibsaniiru.
Qorannichi hirmaattota 141 alkoolii giddu-galeessa ta'e ykn guddaa ta'e kan jechuun, "Yuunayitid Kingidamiitti giddu-galeessaan hanga akka dhugamu eyyamamu harka lama caalaa kan dhugan," ta'uu ibsa Andii Koghelaan.
Akka Coghelaan jedhanitti namoonni kun torban tokko keessatti wayinii qaruuraa 3 ykn biiraa 14 ol ta'e fayyadamanidha.
 Yeroo alkoolii dhuguu dhaabdan wantoota 4 qaama keessanirratti uumaman
Garee sana keessaa, namoonni 94 ta'an akka ji'a tokkoof alkoolii dhugaatii guutummaan guutuutti akka dhaaban, warren hafan ammoo akka duraan dhuganitti akka itti fufan gaafataman.
Gareen jalqabaa dhiirota 43fi dubartoota 51 umuriin isaanii giddu-galeessaan waggaa 45.5 ta'an yommuu ta'an, gareen lammaffaa ammoo hirmaattota 47 kan dhiironni 22fi dubartoonni 25 keessatti argman umurii giddu galeessaa waggaa 48.7 ta'anidha.
Jalqabaafi dhuma ji'aarratti dhiigni qorannoodhaaf hirmaatotta hundarraa fudhatamee bu'aawwan argaman walbira qabuun dorgomsiifaman.
Dhukkuba sukkaaraafi ulfaatina qaamaa:
Hirmaattonni ji'a tokkoof alkoolii dhuguu dhaaban sirni insuuliinii isaanii jijjiirama gaarii agarsiiseera.
"Odeeffannoon keenya akka agrsiisutti alkoolii hanga eyyamamuun ol fayyadamuun dhukkuba shukkaaraa gosa 2 kan jedhamu akka uumamuuf carraa baayyee dabala," jedhu Mehtaan.
Ulfaatinsi qaamaa hirmaatota kanaas jijjiirama agarsiiseera. Kan jechuun akka yeroo alkoolii yeroo fayyadamanii miti.
Alkooliin kaalorii "duwwaa" tiin kan guutamedha; kana jechuun kaalorii qabiyyee nyaataa of keessa hin qabneefi nu hin quubsine ta'ee garuu kan qaama namaa akka malee furdisudha.
Biiraan tokkichi kan akkasii kaalorii hanga kaalorii 200 qabaachuu danda'a, kun ammoo kan dinnicha/moose paakeetii tokko keessatti argannu waliin walfakkaata.
Yoo alkoolii dhuguu keessaniin walqabatee rakkoon nu mudateera jettanii yaaddan, attamitti akka hir'isuu dandeessan isin gorsuu dabalatee wallaansaaf waan argattaniif gara doktoraa deemuun baayyisee barbaachisaadha.
Alkoolii xiqqaa dhuguun ejjennoo namoonni Waggaa Haaraatti fudhachuun namoonni haala fayyaa isaanii foyyeeffatan keessaa isa tokkodha.
Baasii hinbarbaachifneef saaxilamuu hambisuun cinaatti qaama keenyaaf yeroo gabaabaafi yeroo dheeraa keessatti jijjiirama gaarii ni fida.
Akka tajaajila fayyaa hawwaasaa Yuunayitid Kiingidamiitti (Kan NHS gabaajeffame) battaluma alkoolii dhuguu xiqqeessa dhuftan kan ofirratti hubatan:
*Ganama ganama sinitti tola
*Guyyaa guyyaa dadhabbiin isinitti hin dhaga'amu
*Caalaatti ni si'oomtu
*Ulfina qaama hiristu ykn dabaluu dhaabdu
Turtii yeroo dheeraa keessas gama fayyaa keessaniin jijjiiramoota 4 kana argattu.
1. Hirriba nagaa argattu
Alkoolii dhuguun akka namni dafee hirribni isa fudhatu taasisullee, yeroo namni hirriba cimaa keessa seenutti addaan nama kuta.
"Dhugaatii alkoolii hir'isuun yeroo hirribarraa kaatanillee akka nagaa qabaattaniif isin gargaara," jedha NHS.
2. Humna dhukkuba ofirraa ittisuu caalaa cimaa
Alkoolii baayyee dhuguun dandeettii qaamni keenya dhukkubbii ittiin ofirraa ittisu dadhabsiisa. Kana gochuudhaanis, qaamni keessan akka salphaatti dhukkubaaf saaxilamu taasisa.
Akka NHS'n jedhutti, namoonni dhugaatii baayyee dhugan dhukkuboota kulkuloo ta'aniif carraa itti saaxilaman bal'aadha.